Author: Dokree Tagami
Ciidamada Soomaaliya waxay ahaayeen ciidanka ugu xoogan qaarada afrika Afrikada Madoowmarka laga eego Baaxadiisa iyo lacagta ku bixi jirtay iyo qalabka uu watay. Qoralka waa la heli karaa sida uu qabo Ruqasadda Commons ee hindisidda ee marka loo eego la midka ; waxaa soo hoos gali kara qodobo kale. Waxaa loo qaateen ah in macnaha laga wado Djibouti iyo gobolada looga hadlo af Soomaaliga ee wadamada jaarka ah. Qoraalka mooshinka ayaa lagu soo gabogabeeyay jumladdan “Mudane Guddoomiye iyo xildhibaanada sharafta leh, wax badan ayaan u dulqaadanay meel-ka dhacyada iyo gabood-falada dadka iyo dawladnimada Soomaaliyeed ay ku hayaan dawladaha shisheeyuhu, ayadoo maantay ay na hortaallo fursad aan wax uga qaban karno, waajibaadkeena qaran aan ku gudan karno, Alle iyo umadda hortooda”.
Fikradani waxay kaga timid dastuurka markii ugu horeysay Xeerkii Kumeel Gaarka ahaa ee la qoray sanadkii Kuwani waa bogag dibedda ah, waxayna ku furmayaan bog cusub.
Isfaham darada mararka qaar soo federaala dhexgasha dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada waa mid aad u qoto dheer oo soo jiitamayay muddo dheer. Xildhibaanada mooshinka gudbiyay waxay safiirka UAE ku eedeeyeen inuu dawladda u gacan dhaafayo arrimaha maamul goboleedyada.
Mooshinka kuma saabsana Imaaraatka oo kaliya, ee sidoo kale waxa uu xusayaa dowladdo kale oo la sheegay in ay iyaguna farogalin ku hayaan arrimaha gudaha ee Soomaaliya, wuxuuna mooshinka ku baaqayaa in loola dhaqmo si la mid ah Imaaraatka. Nambarada qodobada hoose waxay la socodaan numbarada qodobada baarlamentaariga. Cutubka 7aad Qaab-Dhismeedka Federaalka ee Jamhuuriyadda. Maqal Xal ma laga gaari doonaa khilaafka waddamada Khaliijka?
Markaas Soomaaliya qeyb qeyb ayay ahayd oo laba gobol ayaa dowlado dhistay kuwaasoo ahaa kuwo shaqeynaaya oo leh dastuuradooda. Cutubka 3aad Xuquuqda Aas-aasiga ah.
Haddii musharraxa uu soo jeediyo xisbi, magacaabistiisu waa in ay taageeraan ugu yaraan hal laan oo ka mid laamaha xisbiga ee ku yaalla dawlad-goboleed kasta. Wassiirka la magacaabay haddii uu xubin ka yahay labada Aqal midkood ama uu hayo xil guud ama mid gaara ah, waa in uu iska casilaa kursigiisa 90 casho gudahood kadib markii loo dhaariyo xafiiska.
Haddii uusan jirin madaxweyne-ku-xigeen ama madaxweyne-ku-xigeenku uusan awoodin in uu qabto xilka, afhayeenka Golaha Shacabka ayaa la wareegaya xilka madaxweynaha. Badmareenka Soomaalida Ciidanka Xoogga. Ciidanka soomaaliya waxaa la sameeyay kii, waa markii ay soomalaiya xornimadeeda ka qaadatay gumeeysta-yaashii Ingriiska iyo Talyaaniga. Guddiga Xorta ah ee Dastuurka Efderaalka wuxuu bixinayaa saddex ikhtiyaar oo la kala dooran karo: Qoraalka gudaha oo kooban. Nidaamka Federaaliga ah qeyb kama uusan ahayn qorshihii hore ee Soomaaliya markii laga asaasayay midoobidii dhulalkii ay kala gumaysan jireen Ingiriiska iyo Talyaaniga.
Soomaaliya Waxay leedahay Baasaboor Elektaroonik ah inkastoo kaydka macluumaadka ama Serverka kaydiya Macluumaadka uu yaalo Imaaraatka Carabta Wali Awood uma helin laanta Socdaalka in ay usoo wareejiso Slomaaliya.
Sida muuqata, maamul goboleedyadana ku doodayaan, isfaham darada ugu badan waxa ay salka ku haysaa dastuurka oo ay sheegayaan in uusan kala qeexeyn awoodaha. Madaxweyne ku-xigeenka ayaa la wareegaya xilka madaxweynaha inta dacwaddiisu ka dhammaaanayso.
Lahaanshaha sawirka Madaxtooyada Soomaaliya Image caption Madaxweynaha Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka qaybgalaya caleemo-saarka madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf Murankii ka dhashay moowqifka dowladda federaalka sooomaaliya ka qaadatay khilaafka dowladaha khaliijka iyo kan ay ka qaateen dowlad goboleedyada Soomaaliya ayaa cirka isku sii shareeraya, markastana waxaa kasoo kordhaya wax cusub oo arrimaha sii murjinaya.
Soomaaliya Malahan manhaj mideeysan ee wax barasho, waxaa ka jira Dugsiyo iyo jaamacado si gaar ah loo leeyahay. Madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo shalay ka hadlay magaalada Kismaayo ayaa nasiib darro ku tilmaamay isqabqabsiga dalka ka jira.
Dalalka kale Adlas Siyaasadda portal. Qaybaha kale Xisbiyada siyaasadda Xiriirka Dibadda Baasaboor. Qodobka aad-Xilka Madaxweyne Ku-xigeenka.
Inkasta oo laga yaabo in markii horeba xiriirka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada qaar uu ahaa mid ul booc ah ku kutubayay, haddana murankan ka dhashay federalka khaliijka ayaa u muuqda in uu wax wayn u dhimayo rajo kasta oo laga qabay in xaaladda soo hagaagto.
Governo federale della Somalia ; Af-Ingiriis: Qodobka 97aad-Soo Magacaabida Musharraxa 1 Musharraxa Madaxweynenimada ama ku-Xigeenka Madaxweynaha waxaa soo jeedin karaa xisbiyada siyaasadeed ama wuxuu noqon karaa Musharrax madax-bannaan. Haddii qofna shuruudahaas buuxin waayo waxaa la tartansiinayaa labada musharrax ee helay tirada ugu badan codadka la bixyay.
Dawladda Federaalka Soomaaliya Af-Carabi: Cutubka 6aad Matalaadda Shacabka. Guddiga Xorta ah ee Dastuurka Federaaliga wuxuu bixinayaa saddex ikhtiyaar oo la kala dooran karo:. Cutubka 5aad Dhul, Hanti iyo Degaan. Qodobka 97aad-Soo Magacaabida Musharraxa. Murankaas oo markii dambe xal laga gaaray. Golaha Wasiirrada marka ay helaan kalsoonida Golaha Shacbiga waxay marayaan dhaarta ku xusan sharciga, waxaana ku hor dhaarinaya fadhi gaar ah ee Golaha Shacbiga Gudoomiyaha Maxkamada Dastuuriga.
Qodobka 98aad-Xil-ka-qaadista Madaxweynaha 1 Madaxweynaha Jamhuuriyadda waxaa xilka looga qaadi karaa oo keliya marka uu ku xadgudbo dastuurka, ku tagri-falo awooda xafiiska ama uu galo khiyaamo qaran.
Madaxweyne ku-xigeenka haddii uu geeriyoodo, iscasilo ama xilka laga qaado A fhayeenka Golaha Shacbiga ayaa la wareegaya xilkiisa. Inta uusan hawsha bilaabin Madaxweynaha Jamahuuriyaddu wuxuu marayaa dhaarta ku xusan sharciga, waxaana lagu hor dhaarinayaa xaflad ka dhacaysa fagaare dadweynuhu joogaanwaxaana dhaarinaya Guddoomiyaha Maxkamaada Dastuuriga.
Cutubka 16aad – Qodobbada Guud. Muuqaalka Akhri Itusi xogta Itusi taariikhda.
Banaanbaxyo waaweyn oo lagu taageerayo go’aanka madaxweyne Xaaf ayaa lagu qabtay meelo ka mid ah Galmudug, loogana soo horjeedo moowqifka dhexdhexaadnimada ee dowladda dhexe. Maamul goboleedka Galmudug ayaa noqday midka saamaynta ugu xun uu murankan ku yeeshay kadib markii madaxdii sarsare ee maamulkaasi ay ku kala qaybsameen moowqifka khaliijka. Federaalak iyo Xukunka Soomaaliya.
Madaxweyne Axmed Ducaale Gelle, Xaaf, ayaa taageeray go’aanka xulufadaha Sucuudiga, halka madaxweyne ku xigeenka Maxamed Xaashi Cabdi “Carabeey” iyo goddoomiyaha baarlamaanka Cali Soomaaliua Casir ay taageereen go’aanka dowladda federaalka iyaga oo cuskaday qodobka aad ee dowladda dhexe siinaya awoodda ay go’aan uga gaari lahayd siyaasadda arrimaha dibadda.